La Taliyeyaashii Jwxo-shiil, oo Safarkii Caasmara ka dib ka Qayb Galay Shirar Loo Qabtay Wafti Kaalinka 5aad oo Dubai Jooga – Rasaasa News
La Taliyeyaashii Jwxo-shiil, oo Safarkii Caasmara ka dib ka Qayb Galay Shirar Loo Qabtay Wafti Kaalinka 5aad oo Dubai Jooga
Mar 3, 2010 afwaranle, Dolal, Dubai, Eritrea, Jwxo-shiil
Rasaas – [Dubai] Wararka ka imanay dalka Emeratka Carabta, ayaa waxay sheegayaan in wafti ka socota Kaalinka 5aad ay baryahan socdaalo ku marayeen dalka Emeratka, gaar ahaana Cimaarada Dubai, iyaga oo la kulmay Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee Dubai.
Waftigan ayaa waxay qabteen shirar isku xig xiga oo ay kula kulmayeen Jaaliyadaha ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya. Waftigan oo heer hoose ahayd, ayaa waxaa horkacayey gudoomiyaha gabalka Doolo, arimaha ay u socdeena waxay ahaayeen arimo sulxis ah.
Hadaba, intii ay waftigu joogeen Dubai, ayaa waxaa agaasimayey oo bixinayey kharajyada shiraraka, la taliyeyaasha Jwxo-shiil, oo todobaadkii hore uun ka soo laabtay Caasmar.
Sida ay wararku sheegayaan, waxaa waftiga Kaalinka 5aad loo dhiibay warqad uu Jwxo-shiil ka soo qoray Eritrea, oo ay ka wadeen Cabdala Afwaranle iyo Mustafe Cabdi Cali. Agaasinka Waftigan waxay qusuliyada Itobiya u xil saartay saddexda nin ee Jwxo-shiil, la taliyeyaasha u ah oo ah Cabdala Afwaranle, Mustafe Cabdi iyo Dolal Aadan Dhagoole oo iyagu maamula Xawaalada Kaah. Ragan oo ahaa raga gooya talada kooxda Jwxo-shiil, lacago aad u badan ku helay magaca ururka ONLF ayaa eegga baarimo wacalaynaya.
Waa arin siyaasadeed oo aad u culus [top agent] in Jwxo-shiil, oo Caasmara fadhiya lala soo kulmo warqadna laga soo qaado, wixii talo ah ee la siin karayna la siiyo, ka dibna lala kulmo wafti ka socda Kaalinka 5aad iyo qusuliyada Itobiya.
Waxaan wax qarsoon ahayn in kooxda Jwxo-shiil, ay baryahan aad isugu dhabar jabinayso in ay hesho heshiis iyaga iyo Itobiya dhexmara inta ayna banaan isa soo taagin, ayeyna doonayaan in ay dabo goostaan ururka ONLF.
Maadeey iyo Cadani arinta lacagaha Jaaliyada Sweden foodsaare ayey ka dhigteen, waxayna Sweden kula kulmeen xubno Itobiyan ah.
Dhanka kale Maxamed Ismaciil arinta ugu weyn ee uu Canada u tagay, ayaa ah arimo ay wadaan rag hore Kaalinka ugu shaqayn jiray oo iyana safaro ku jooga dalka Canada.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa arinta aad ugu dhexjira A Adar iyo nin la yidhaahdo Rabiile oo iyagu ah rag taabacsan Itobiya Kaalinkana u shaqeeya.
Si kastaba ha ahaatee, sida ay arintu u socota kooxda Jwxo-shiil, ayaa u egg neef la gawracay geedo kama waabto iyo in ay daba goostaan ururka ONLF, ee ay uubta ku rideen. Waxaase ay halis weyn dulsaaran tahay Jwxo-shiil, oo doonaya in uu midho ka gurto laba cadow dhexdood.
Qolkii Kaniisada ee Jaaliyada iyo Qashinkii Jwxo-shiil oo Jugta Iskuhaysa